Rabshadihii Capitol: Michael Jackson nin isu ekeysiiyay oo la dagaalay garsooraha maxkamadda Mareykanka | Biyoguurenews.com
Home Wararka Rabshadihii Capitol: Michael Jackson nin isu ekeysiiyay oo la dagaalay garsooraha maxkamadda...
James Beeks ayaa maxkamadda dhexdeeda ka sheegay in isaga uusan sharci qaban karin maadaama uu yahay 2qof barakeysan”.
Nin isku matala inuu yahay fannaankii caanka ahaa ee reer Mareykan, Michael Jackson, oo ku eedeysan inuu ka qayb galay rabshadihii horaantii sanadkan ka dhacay xarunta US Capitol ayaa la dagaallamay garsooraha maxkamaddii lasoo taagayay, isagoo diiday amarka maxkamadda.
Garsooraha ayaa James Beeks ku eedeeyay inuu yahay “qof wax micno darro ah ku hadlay” kaddib markii uu sheegay inuu yahay nin “barakeysan oo uusan sharciga qabanin”.
Ilaa hadda ma uusan gaarin heer uu ra’yigiisa uga hadlo dacwadda uu wajahayo si uu go’aankiisa ugu muujiyo inuu qirsan yahay dambiga loo heysto iyo in kale.
“Ma is matali karo sababtoo ah isla anigii unbaan ahay,” ayuu yiri.
Kaddib markii uu Mr Beeks sheegay inuusan qabaneynin sharciga Mareykanka , garsooraha ayaa ku yiri: “Waxaas aad sheegeyso oo dhan waa micno darro.”
“Qof eedeysane ah oo diiday hannaanka caddaaladda, diiday in lagu xukumo sharciga Mareykanka, diiday xeerka iyo kala dambeynta lama sii daayo inta uusan xukunkiisa dhicin sababtoo ah qofkaas laguma kalsoonaan karo inuu u hoggaansamo shuruudaha damaanadda,” ayuu yiri garsoore Beryl Howell, oo u digayay eedeysanaha.
Mr Beeks wuu beeniyay inuu xubin ka yahay kooxda isku magacowda muwaadiniinta xorta ah, wuxuuna eeddaas ku tilmaamay mid isaga ku ah “aflagaaddo”.
Baareyaasha ayaa sheegay in Mr Beeks uu maalintii ay rabshadaha dhacayeen xirnaa jaakad ku jirtay heestii uu xiddigga pop-ka qaaday 1987-kii oo la yiraahdo “Bad” world tour, uuna la yimid gaashaan guri ku sameys ah.
Pauline Bauer, oo iyada kaligeed is difaaceysay, ayaa soo xigatay qoraallo ku jira Bible-ka iyadoo ku carqaladeyneysay hadallada garsooraha maxkamadda, waxayna sheegeysay in ay tahay “qof si xor ah u nool” oo aysan qabanin shuruucda Mareykanka.
Previous articleSuudaan oo u hanjabtay Ethiopia sheegatyna inay ka argoosan doonto kuwii ciidankeedankeeda laayay
Next articleF.C.Waraabe oo ka hadlay Safarkii Hogaamiyeyaasha Ucid & Waddani ee Nairobi,Qadiyada Boqor Buurmadow & Booqashadii M/weyne Mustafe Cagjar ku yimi S/land